Ponte Invisibile, London, 2008
ISBN: 88-88934-07-3 -
“Haash xabbad sigaar ah oo la ganay, oo dalaq tidhi shaadh katabaan sudhan jeebkiisa silsilad dhacdooyin xidhiidhsan ah oo ka dhashay ayaa saldhig u ah sheekadan”
ROGE waa sheeko male awaal ah. Sheekadani waa tii saddexaad ee taxanaha “cirsankayeedh”. Waxa ka horreeyey LADH oo uu qorey Cabdillaahi Cawed Cige iyo AANADII NEGEEYE oo uu qorey Ibraahin Yuusuf Axmed “Hawd”. Waa suugaan abuuristeedu ku salaysan tahay hindisaha iyo male-awaalka abwaanka curiyey.
Akhriste - 2011-03-02 13:18:30
jamaal - jawaze@hotmail.co.uk
maasha allah buugan waan akhristay runtiina add iyo aad buu ii xiiso geliyay...i tried 2 order some more books from same author...but never got replied please give some advises about where i can buy some more books of yours thanks
Akhriste - 2010-12-29 03:27:35
Cabdicasiis Baashe - carab683@hotmail.com
Waa sheeko xiiso leh oo u eeg wax dhacay ama dhici kara. Waxay ku dhalinaaysaa akhristaha wadaninimo iyo waxtarka dalkiisa iyo dadkiisaba, waxaykale oo dareensiinaysaa xilka qof walba ka saaran dalkiisa, hadday tahay difaaciisa, u halgankiisa iyo hadday tahayba inuu qofku wax u barto si uu wax u taro muwaadiniinta tabaalaysan. Si cilmiyaysan ayuu abwaanku u qoray sheekada, ereyada uu doortayna waa kuwo aad u xeeldheer oo sawir waadax ah ka bixinaya deegaanka iyo silsilada dhacdooyinkaba, taasna waxaa si fiican u garan kara qofka kala yaqaana magaalada Burco iyo hareereheeda oo ah deegaanka ay sheekadu ka dhacayso, sidoo kale qofka aan Burco aragna sawir buuxa ayuu ka helayaa. Aad ayuu u mahasanayahay qoraagu
Akhriste - 2008-12-14 05:02:35
nimo - naciimo8@hotmail.com
waa sheeko ad uu wacan sheekadan lool